Buyinganew TV - Amazing Yangon
Home /Featured, Media/Buyinganew TV
A guide to the best screens available in Myanmar today
Every January in Las Vegas, the consumer electronics show (CES) unites the latest innovations from industry leading electronic companies under one roof. Looking at CES 2017’s social media buzz analysis, it was found that the most popular key words on social media were “smart”, “thin”, “4K” and “OLED”. These findings helped prove that innovation in TVs drew the most attention during the event. The analysis looked at both consumers posts as well as comments made by specialized media outlets.
There is todayabig number of display technologies available in the Myanmar high-end TV market and consumers can feel overwhelmed with information when they look foranew TV. What are the main differences between LED, OLED and QLED? Which technologies offer the best image and are the most cost efficient?
Light Emitting Diodes are used by almost all the leading TV making companies. The technology consists ofaback-light powered by diodes coupled with colored filters. The backlight allowsabright while energy efficient display. If LED TVs do not use cutting-edge technology they remainagreat choice inahighly competitive market.
QLED (Quantum dot Light Emitting Devices) displays can be very misleading to consumers. Indeed, if some TVs are branded with QLED technology, it is important to note that they do not use the actual QLED system but rebrand the LED technology instead. Originally, QLED technology consists of self-emitting microscopic molecules, when activated they emit their own colored light. Different quantum dots emit different colored lights. This system allowsahigh-end definition, with great contrast and brightness. The trick however is that the technology is still far from being ready and experts forecast the first genuine QLED displays to not be available before early 2022. What are the QLED TVs in the market today made of then? All TVs with QDs so far use photo luminescent quantum dots. In current generation TVs, these QDs work in concert with the blue LEDs that power the TV’s backlight, meaning they offer similar benefits from LED displays without major enhancements in picture quality and contrast.
OLED displays do not use quantum dots but organic light-emitting diodes. The main difference with LED and QLED displays sold today is that they do not needabacklight to function, the brightness and the colours are emitted from the same component allowing the screens to be thinner, more uniform, and withagreater viewing angle. Basically, someone sitting next to you will receive the same colors and brightness from the screen. LED and QLED displays need to havealight projected to the screen in order to display colours, while OLED doesn’t. The main advantage here is that OLED screens manage to producea‘perfect black’ as it can simply switch offadiode, where QLED would need to useablack filter on blue light. Findinga‘perfect black’ creates better contrasts and expectedly, makes colors stand out better.
To summarize, LED displays areacommon and reliable technology for the price they sell for, they have been around for long and play inahighly competitive market, bringing quality higher and prices fairly lower. Some manufacturers have been naming their screens QLED in order to escape the LED competition. While the screens end up of better quality, they present the same limits as LED displays. OLED technology however, not needingabacklight, produce the best image available in the market today, their high contrast ratio, coupled with great definition potential and wide viewing angle positions them over other (and older) technologies available in Myanmar.
Looking at the Myanmar market, LED and OLED technologies make up for the most sought-after high-end TV displays. Sony’s LED screens seem to be the most popular although being followed closely by products from LG, T-home and Samsung. Looking at the best technology available however, LG’s OLED display outperforms competition, including Samsung’s QLED screens. LG’s OLED technology managed to get rid of the back-light – bringing viewers ‘perfect blacks’ and therefor ‘perfect colours’ for them to enjoy.
ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် အကောင်းဆုံး တီဗွီဝယ်ယူနိုင်မယ့်ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်
နှစ်စဉ်ဇန်န၀ါရီလတိုင်း၊လက်စ်ဗီဂတ်စ်မြို့တွင် ထိပ်တန်း အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီများ၏ နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစု၍ လူသုံးကုန်လျှပ်စစ်ပြပွဲ(Consumer Electronics Show – CES) ကို ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ CES ၂၀၁၇ခုနှစ်၏ လူမှုကွန်ရက်(social media) ကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပါက Smart၊ ပါးလွှာသော၊ 4k နှင့် OLED အစရှိသော စကားလုံးများကို ထည်လဲသုံးနှုန်းထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ အဆိုပါ အချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ထိုပြပွဲတစ်ခုလုံးတွင် တီဗွီ ကို လူအများဆုံးစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းသည် သုံးစွဲသူများ၏ တင်ထားသောစာများ (post) များနှင့် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများမှ မှတ်ချက်များ (comment) အပေါ်အခြေခံ၍ ဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် မြန်မာပြည်၏ထိပ်တန်းတီဗွီဈေးကွက်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီ နည်းပညာ အမျိုးမျိုးဖြင့် တီထွင်ထားသော တီဗွီမှန်သားပြင်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၀ယ်ယူသူများအနေနှင့်လည်း ဇဝေဇ၀ါ နှင့် ဆုံးဖြတ်ရခက်လှသည်။ သို့ဆိုလျှင် LED, OLED နှင့် QLED တို့၏အဓိကခြားနားချက်တွေက ဘာလဲ။ မည်သည့်နည်းပညာက ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးအတန်ဆုံးဖြစ်ပါသလဲ။
တီဗွီထုတ်လုပ်သော ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများ အများစုနီးပါးသည် အလင်းရောင်လွှင့်ထုတ်သော ဒိုင်အုပ် (Light Emitting Diodes) ကို အသုံးပြုကြသည်။ ထိုနည်းပညာသည် ဒိုင်အုပ်မှ အားယူထုတ်လုပ်သော အနောက်ဘက်အလင်းရောင် (back light) နှင့်ရောင်ကာများ( colored filters) ကိုအခြေခံ၍ တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်အလင်းရာင် (back light) သည် ပိုမိုလင်းလက်စေပြီး စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။ LED တီဗွီများသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားသော ဈေးကွက်ထဲတွင်ပင် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် တီထွင်ထားမှု မရှိသည့်တိုင်အောင် လူကြိုက်အများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်သည်။
QLED (Quantum dot Light Emitting Devices) အမည်တပ် မှန်သားပြင်များသည် ၀ယ်ယူသူများကို ဇဝေဇဝါ နှင့်ဒွိဟဖြစ်စေပါသည်။ အကယ်၍ အချို့တီဗွီများသည် QLED နည်းပညာ ဖြင့် တီထွင်ထားသည် ဟုဆိုခဲ့သော် အမှန်စင်စစ်မှာ QLED နည်းပညာအစစ်ကို အသုံးပြုထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ LED နည်းပညာကိုသာ ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကြော်ငြာထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထူးသတိပြုရန်လိုပါသည်။ မူရင်းအဆိုအားဖြင့် QLED နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်သော မိုင်ကရိုစကုပ်ပစ် မော်လီကျူးများ (microscopic molecules) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဆိုပါမော်လီကျူးများသည် စက်ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်များကို ထုတ်လွှင့်ကြသည်။ Quantum dot အမျိုးမျိုးမှ အရောင်အမျိုးမျိုးထုတ်လွှင့်ကြသည်။ အဆိုပါနည်းပညာသည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းမြှင့်မားကာ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်နှင့် အလင်းရောင် တောက်ပမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အမှန်မှာ QLED နည်းပညာအစစ် ထွက်ပေါ်လာရန် အလှမ်းကွာဝေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာ ပထမဆုံး အနေဖြင့် ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ယခုအချိန်တွင် ဈေးကွက်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည် ဆိုခြင်းမှာ QLED အစစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ချေ။ သို့ဆိုလျှင် ယနေ့ဈေးကွက်ထဲတွင် ရောက်ရှိနေသော QLED နည်းပညာပါ တီဗွီဆိုသည်မှာ မည်သို့ တီထွင်သနည်းဟု မေးခွန်း ထုတ်ဖွယ်ရာရှိသည်။ အဖြေမှာ QLED အမည်တပ်တီဗွီများမှာ တောက်ပသောအလင်းတန်းများ ထုတ်လွှင့် ပေးနိုင်သည့် photo luminescent quantum dots များကိုသာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုထွက်ပေါ်လာသော တီဗွီများသည် ဖျော်ဖြေရေးပွဲများတွင် အသုံးပြုသည့် အပြာရောင် LED မီးတန်းသဘောမျိုးဖြစ်ပြီး သာမန် LED မှန်သားပြင် များသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုများကို အထူးတလည် ကောင်းမွန် အောင် တီထွင်ဆန်းသစ် ထားခြင်းမရှိပါ။
OLED မှန်သားပြင်များသည် QLED ကဲ့သိှု့Quantum dots များအသုံးပြုထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း အလင်းရောင်ထုတ်လွှင့်ပေးသော ဒိုင်အုပ်(organic light-emitting diodes) များဖြင့်တည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ OLEDသည် ယနေ့ဈေးကွက်ထဲတွင် ရှိနေသော LED၊ QLED တို့နှင့် အဓိက နည်းပညာကွာခြားချက်မှာ OLED သည်အနောက်ဘက်အလင်းရောင် အသုံးပြုထားခြင်းမရှိဘဲ ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်ခုတည်းမှ အလင်းတန်းနှင့်အရောင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီး မှန်သားပြင်ကို ပိုမိုပါးလွှာစေကာ အရောင်ညီပြီး ရှု့ထောင့်မျိုးစုံမှကြည့်လိုက်လျှင်လည်း ရုပ်ထွက်ညီသည်။ ဥပမာဆိုရသော် OLEDတီဗွီသည် သင့်နှင့်အတူ ဘေးတွင်ထိုင်ကြည့်နေသောသူသည်လည်း သင်မြင်ရသကဲ့သို့ပင် တီဗွီမျက်နှာပြင်မှ ကာလာအရောင်မှန်နှင့် အလင်းရောင်ကို ထပ်တူရရှိမည်ဖြစ်သည်။ LED နှင့် QLED မျက်နှာပြင်တို့တွင်မူ ကာလာထွက်ကောင်းရန် အနောက်ဘက်မှ အလင်းရောင်ထုတ်လွှင့်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ OLED မှန်သားပြင် ၏အဓိကအားသာချက်မှာ ဒိုင်အုပ်ကိုပိတ်ချလိုက်ရုံဖြင့် လှပသောအနက်ရောင် (perfect black) ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ QLED မှာမူ အပြာရောင်အလင်းတန်းတွင် အမည်းရောင်ကာ (black filter) ကိုအသုံးပြုရသည်။ OLED နည်းပညာမှ လှပသော အနက်ရောင်(perfect black) ပါရှိခြင်းကြောင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အရောင်ထွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အချုပ်ဆိုရသော် LED မှန်သားပြင်များသည် ငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့်အညီ ယုံကြည်စိတ်ချရသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤကုန်ပစ္စည်းများကို ပြိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားသောဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေခဲ့သည်မှာ အချိန်အတန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်မျှတမှုရှိခဲ့သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီကြီးများသည် LED ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်သာလွန်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ တီဗီမျက်နှာပြင်များကို QLED ဟု ပြောင်းလဲအမည်တပ်လာကြသည်။ QLED မျက်နှာပြင်များသည် အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည် ဟုဆိုသော်လည်း LED မျက်နှာပြင်များနှင့်ထူးမခြားနားပင်ဖြစ်သည်။ OLED နည်းပညာကမူ အနောက်ဘက် အလင်းရောင်သီးခြားမလိုပဲ ယနေ့ဈေးကွက်အတွင်း ပုံရိပ်အကောင်းဆုံးကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ အချိုးကြသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိခြင်းနှင့်အတူ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးသာလွန်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရှုထောင့်စုံ မြင်ကွင်းကျယ်အရည်အသွေးတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအခြားနည်းပညာများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဈေးကွက်ကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် LED နှင့် OLED နည်းပညာများသည် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင်တီဗီများနေရာကို အခိုင်အမာယူထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ Sony ၏ LED မှန်သားပြင်များသည် ဈေးကွက်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး LG ၊ T-home နှင့် Samsung ထုတ်ကုန်များသည် ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး နည်းပညာများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် LG ၏ OLED မျက်နှာပြင်သည် Samsung ၏ QLED မျက်နှာပြင်အပါအဝင် အခြားအလားတူ ထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ကြည့်လျှင်လည်း သာလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် ပြီးပြည့်စုံကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။ LG ၏ OLED နည်းပညာသည် အနောက်ဘက်အလင်းရောင်ပါရှိစရာမလိုဘဲ ကြည့်ရှုသူများအတွက် ‘လှပသောအနက်ရောင်’ (perfect black) ကို ပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် ‘ပြီးပြည့်စုံသောအရောင်များ’ (perfect color) ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
Rose Garden Hotel in Yangon